बालबालिकालाई चिसोका कारण हुनसक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट कसरी जोगाउने? [भिडियो वार्ता] :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
बालबालिकालाई चिसोका कारण हुनसक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट कसरी जोगाउने? [भिडियो वार्ता]
रिता लम्साल बुधबार, पुस २२, २०७७, १२:४३:००
काठमाडौं– नेपालमा अहिले जाडो मौसम छ। जाडो मौसममा बालबालिकामा चिसोका कारण रुघाखोकी, झाडापखाला, निमोनिया लगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ। चिसो लाग्दा स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएमा बालबालिहरुका गम्भीर बिरामी पर्न सक्छन्। त्यसैले चिसो मौसममा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
चिसो मौसममा बालबालिकामा कस्ताकस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छन्? बालबालिकालाई चिसोबाट बचाउन के गर्नुपर्छ र चिसो लागिहाले कस्ता सावधानी अपनाउन सकिन्छ? लगायतका विषयमा कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा कान्ति बाल अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर रामहरि चापागाईँसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ डा चापागाईंसँग रिता लम्सालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोभिड बिरामीको उपचारका लागि पहिलेभन्दा निकै सक्षम छौंः डा नितेश कनोडिया गम्भीर खालका बिरामी पनि बढ्न थालेपछि त्यो समय निकै गाह्रो भएको थियो। त्यही बिचमा हाम्रो अस्पतालका दुई जना कर्मचारीलाई कोभिडकै कारण हामीले गुमाउनु पर्‍यो। निमोनिया भएर गम्भीर भएका बिरामीको उपचारमा पनि समस्या थियो। बिहिबार, वैशाख २, २०७८